U isticmaal guddi KDE sidii kuugu habboon dekedda | Laga soo bilaabo Linux
U isticmaal guddi KDE sidii xero kuugu habboon
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, GNU / Linux
Waqti ka hor waxaan tusay shaashadaha shaashadayda qaar, waan isticmaalay Qaahira-Dock sida barnaamijka rakibida barnaamijka.
Si kastaba ha noqotee ... uma baahnid meel xayeysiin ah sida si aad u bilowdo barnaamijyo, u xakameyso muusiggeena muusikada, iyo inbadan 😀
U fiirso shaashadda soo socota, si gaar ah u eeg guddigayga sare (ama dekedda, sikastoo aad rabto inaad u aragto haha):
Sida aad u aragto, iyada oo loo marayo guddi kale oo aan ku daray iyo tufaaxa saxda ah, waxaan hayaa arji furaha, waxaan xakameynayaa muusigayga muusigaClementine), Waxaan haystaa xaalada CPU-kayga, RAM iyo isticmaalka shabakada, iyo waliba badhanka xiritaanka / dib udajinta art
Ku guuleysiga tan waa mid aad u fudud, waa inaan marka hore ku darnaa guddi cusub oo faaruq ah, tan waxaan ugu saxeynaa desktop-ka, Ku dar Guddi, Guddi madhan :
Marka guddiga la abuuro, waxay noqon doontaa mid ku filan in la bilaabo ku darida waxyaabaha aan u baahanahay 🙂
Tusaale ahaan, si aan u dhigo guddiga sidaan u haysto, waa inay ku daraan waxyaabaha soo socda:
Sii deyn deg deg ah
Hadda waxay u egtahay.
Jooji / Joojinta.
Sidoo kale waa inay ku daraan kala-furid (firaaqo) haddii ay rabaan in qayb kasta oo ka mid ah guddiga la kala saaro, laakiin tani mar horeba waa dhadhankeeda ...
Guddigan waxaa loo qaabeeyey si otomaatig ah in loo qariyo, iyadoo sidan la sameynayo had iyo jeer ma muuqan doonto, laakiin waa la hawlgelin doonaa ama la arki doonaa markii aad calaamadda tilmaamaha / jiirka kor u qaaddo, oo aad ugu dhajiso dhinaca kore ee shaashadda:
Sikastaba, waa wax fudud ... shaqeynaya ... hagaagsan 🙂
Maxaad u maleyneysaa ragga ... Maxey ku xirtaa isticmaalkeeda y? Ma u beddeli lahayd guddigan haddii aad isticmaasho KDE?
Oh, by the way, deegaanno kale isla waa la gaari karaa, taasi waa, tan 'fikradda / fikradda ah' ee loo adeegsanayo guddi ahaan dekeddu maahan mid gaar u ah KDEhadaad isticmaasho Gnome, Xfce kuwa kalena wali way qaban karaan 😉
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » U isticmaal guddi KDE sidii xero kuugu habboon
73 faallooyin, ka tag taada
Gregory seefayaasha dijo
Ma isku dayday wbar? Waa wax fudud, heer hooseeya oo heer hoose ah mana cuno wax ilo ah.
Jawaab Gregorio Espadas
Yup waan isku dayay, sida AWN, Cairo-Dock, Docky, KDock, iyo kuwa kale haha ​​😀
Wbar ma ku dhejin karaa processor, RAM iyo dhammaan kormeerayaasha? Waxaan isticmaalay dhowr sano ka hor, laakiin ma xasuusto inay awood u leedahay 0_oU
XFCE marka loo eego waxaa jira gudi leh codsiyo la bilaabayo, waxaan siinayaa hufnaan, waxaan ka dhigayaa inay si otomaatig ah u qarsoonaato, waxaan ugu dhaqaajiyaa dhanka bidix ee shaashadda (waxaan caado ka ahaa Midnimada: P) oo waxaan dhigay kuwa wax furaya iyo tufaaxyada in aan u baahanahay oo aan marki horeba haysto. Mana aha inay leedahay saameyn muuqaal oo weyn, laakiin dareenkaas waxaan door bidaa hufnaan aan fiicnayn (oo u keenta) iyo mid saafi ah.
Ku jawaab Mauritius
Maxaad u maleyneysaa ragga
Taasi waa inaad noqotaa wax yar oo asal ah
Muxuu cadaabku asal ahaan ka leeyahay halkan _¬ ...
Aan aragno, sharax sababta aad adigu leedahay, anigu asal kama ihi halkan gggrrr
Maxaa yeelay dekeddu waa Mac O $ X
Ayaa garanaya cidda hindisay fikradda ah 'Meel 'toobiyeyaal' lagu dhejiyo waxyaabaha aan inta badan isticmaalno oo aan ugu baahan nahay qaab fudud»¬_¬… waxaa jira xad u yeelid inuu noqdo nacalad xagjir ah… ha ku faanin troll…
Meel 'toobiyeyaal' lagu dhejiyo waxyaabaha aan inta badan isticmaalno oo aan ugu baahan nahay qaab fudud
Waxaa jira wax la yiraahdo toobiye, intaa waxaa sii dheer KDE oo ku yaal desktop-ka wuxuu leeyahay daaqad joogto ah oo ah galka, haddii aan si sax ah u xasuustona waxay leedahay codsiyo.
Ma doonayo inaan yareeyo codsiyadayda si aan u arko 'wax' taas oo ii oggolaanaysa inaan furo barnaamijyo cusub anigoo adeegsanaya 'toobiyeyaal'. Waa wax aad u dhib badan, waxaan rabaa inaan furo barnaamijyo cusub, arko dareemayaasha isticmaalka, iwm, dhammaantood aniga oo aan yareeynin barnaamijyadayda furan, iyo anigoon siin wax ka badan 2 qasabno. Ma taqaan waddo kale? ...
Haa, ku xeji, tusaale ahaan, oo aan ahayn wax weyn, ama fur liiska K, oo aan kugu qasbeynin inaad wax uun yareyso
Furitaanka menu-ka K iima ogolaanayo inaan si dhaqso ah ugu xiriiro dareemayaal, marka lagu daro waxay matali laheyd 2 guji si loo furo arji, halka qeybta sare ay tahay kaliya 1.
Haa, aan aragno haddii aad fureyso eggs Ukun u dir
Waxay ku saabsan tahay inaad dareento raaxo, sida ugu macquulsan. Haddii aan isticmaali lahaa Windows ma lihi wax aan ka doorto oo aan ka ahayn in la i khiyaaneeyo, laakiin sidaas maahan, sida aan u adeegsado Linux waan awoodaa oo waxaan ku jiraa xaqayga TOTAL inaan wax ka beddelo wixii aan doono, si aan ugu fiicnaado nidaamkayga rukhsadaha iyo in Hubaal).
Markii ay Apple patent-ka ka bixisay dekedda, iyagoo leh waxay ikhtiraaceen fikradda, in qof kale uusan adeegsan karin wax la mid ah dekedda ... waan arki doonaa waxa aan ku sameeyo halkaas there_¬
Iyo haa, waad ka badantahay waligaa maalmahan, waxaan u maleynayaa in wax badan oo aad ku isticmaasho OS daaqada ay saameyn kugu yeelatay LOL !!
Haa, laakiin hal guji oo dheeri ah saameyn kuma yeelanayo raaxada, haddii aan horeyba kuu sheegay, cabsida herniation, dabcan waxaan kugu soo dalacayaa daryeel qaali ah
Taasi marka loo eego aragtidaada, habka aan u arko maahan sidaas, hal guji dheeraad ah ayaa iga careysiisa 😐
Miyaan diyaarsadaa nidaamyada faleebada? Adiga oo ah adiga waxaan kuu ogolaanayaa inaad doorato.
Palomilla ama Abbocath?
Waa maxay adeer eey ka badan rin tin tin
Waxaan iska dhigayaa inaanan taas aqrin, maxaa yeelay wax ka yar 1m² waxaan dhihi lahaa waxyaabo yar oo aan sameyn doonin wax qosol leh > :(
Geesinimo, kaliya waxaad isticmaashaa qalabka qunsulka? Sababtoo ah aniga waxay ila tahay in daaqadaha "aysan u dhalan" GNU / Linux
Ku jawaab isar
Hal shay ayaa dhiirrigelin ah mid kalena waa nuqul
Waa isku mid, haddii adiga loogu talagalay deked, maxaa yeelay waa deked waa Mac OS lafteeda, daaqad, maxaa yeelay waa daaqad waa nooc ka mid ah nidaamka qalliinka ee marka hore isticmaali doona. Tanina waa hal tusaale, maxaa yeelay waxaa jira kun kale.
Meeshu waa wax waxtar leh ugu yaraanna waxay ii fududeyneysaa inaan bilaabo barnaamijyada aan aadka u isticmaalo haddii aan gacanta ku haysto jiirka (haddii aan 2 la socdo kumbuyuutarka, way cadahay inaan isticmaalo krunner). Maxaan haystaa kickoff? Haa, waan ogahay, laakiin meesha wax lagu keydsado waxaan ku keydsanayaa guji iyo waxa ka muhiimsan, inaad raadiso barnaamijka liiska.
Waa maxay asal ahaan? Sida gabi ahaanba waxkasta oo inagu hareeraysan, hadii aysan jiri laheyn hal moodeel taleefan (xaqiiqda abuuritaanka qalab u ogolaanaya isgaarsiinta sida ay sameeyaan horeyba waa nuqul) Kaalay, haddaad joogto ahaan lahayd, xitaa tegidda godku kuuma caawin doono maxaa yeelay awoowayaasheen "mar hore ayay hindisteen".
Kaalay, haddaad joogto ahayd, xitaa god la’aan u tegi mayno kaa caawin doonta sababta oo ah awoowayaasheen “mar hore ayaaba allifey”.
dekedda waxaan ku keydsanayaa guji iyo waxa ka muhiimsan, oo ah inaan raadiyo barnaamijka liiska
TILMAAM AH !!! Taasi waa waxa aan ula jeedo raaxada, fudaydka, waqtiga ilaaliyo, qasabno ...
Sidaan u arkay inaadan waxba ka ogayn, waxaan qaatay xorriyadda raadinta Google ee kombuyuutarrada asalka ah ee KDE iyo mid kale oo ka socda KZKG ^ Gaara, taas oo xitaa haddii ay tahay Gnome ay isku mid tahay:
Waa la waafajiyaa oo waxba kama moodaan, marka lagu daro waxay u muuqdaan kuwo fiican
Hadda kan ku saabsan KZKG ^ Gaara:
Waxaan ku aragnaa nafteena kumbuyuutar laga buuxiyay waxyaabo: Dock (Mac), Conky, Dhacdooyin, In la sameeyo, kormeerayaal iwm. Waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in asalka asalkiisu wasakh yahay, ama sidaan idhaahdo, reggaeton xun.
Ma jiraan wax asal ah oo leh kan markab marka laga reebo culeyska xad dhaafka ah.
Waxaan u maleynayaa in badankood ay jeclaan doonaan labada hore.
Waxba miyaanay koobiyeyn? Waxay isticmaalaan conky si ay u muujiyaan macluumaadka nidaamka. Qaanuunka 3, waxa ay tahay inaad tixgeliso asal ahaan maahan adeegsiga xirashada, laakiin waa qurxintiisa ama macluumaadka ay bixiso. In KZKG ^ Gaara deck desktop ay u egtahay Mac OS deck Haa, laakiin ma ahan midka maqaalka kujira oo aad si isku mid ah u dhaleeceysay Isticmaalka CPU ama wax lamid ah.
PS: Waan ku raacsanahay in desktop-ka KZKG ^ Gaara uu buux dhaafay, ugu yaraan si aan u jeclaado, laakiin sababtu ma ahan meesha lagu xirto. Ku eedee shaashadda shaashadda ka dhigaysa mid cidhiidhi ah (maahan inay taasi tahay). Ka sokow macluumaadkaas tirada badan ee ku jira meel aad u yar "way iga yaabisay."
PD2: Su'aal kale, Geesinimo, sidee u kala soocdaa dekedda iyo guddi ay ka buuxaan astaamo codsi?
Dhinaca desktop-kayga ... hehe haa, waxaan qirayaa in xoogaa la saaray, hadda waxaan arkayaa desktop-kayga maanta oo waxaan u arkaa uff, super nadiif 😀
Shaashadaydu waa yartahay resolution xalka ugu badan ee 1024 × 768, muuqaalka laptop-kayga wuxuu kayaryahay 15 inji (13 ama 14, ma xasuusto)…… laakiin wali waa laptop aad u fiican hahahaha.
Hadda, miyaadan dafiri doonin in kala duwanaanta midabka ee wax walba oo jiray ay isku mid noqdaan? 🙂
Taas ma dafirayo, xD maya
Sidee u kala soocdaa inta u dhexeysa dekedda iyo guddi ay ka buuxaan astaamo codsi?
Quruxleyda, runtu waxay tahay ma jecli inaan dhigo astaamo, inta Conky ah waana intaas
Waxba miyaanay koobiyeyn? Waxay isticmaalaan conky si ay u muujiyaan macluumaadka nidaamka.
Sure, maxaa yeelay nin kale ayaa ka horreeyay Conky, sax? Kaalay ...
Waxaa la mid ah dekedda, miyaan asal ahayn maxaa yeelay sidaad u sheegtay MacOS ha i hor dhigin?
Maaha inay iyagu ka sii hor mariyeen, ee waa inay iyagu ikhtiraaceen
Waa wax aan la aqbali karin in Gaara uusan dhaafin Gidaarkaas.
LOL !!!! kaalay, waanan ka tegayaa: https://blog.desdelinux.net/wp-content/uploads/2012/02/Elisha-Cuthbert-kzkggaara-wallpaper.jpg
PS: Geesi, waad badbaadin kartaa cayda, dhaleeceynta, ama haha ​​kasta
Geesinimo, waad badbaadin kartaa naftaada cayda, dhaleeceynta, ama wax kasta
Sidaad u rabto reggaeton xun
Xagga sare, mid kale oo horena waxaad u leedahay 1000 faallooyin 😀
Geesinimada wax iga jawaab:
Maxaad u isticmaashaa PC, haddii taasi ay abuureen "qof kale"? Maxaad u xirataa dharka haddii qof kale uu taas ka kooban yahay? Maxaad u dhageysataa isla muusigga ay dadka kale dhagaystaan? Maxaad u isticmaashaa Archlinux ama Windows haddii dad aad u tiro badani ay isticmaalaan? Sikastaba ... Waxaan hayaa su'aalo badan oo aan ku waydiiyo, laakiin dhamaantood waxay igu hogaaminayaan jawaab isku mid ah: ASAL MA AHID, AMA AMA.
Maxaad u isticmaashaa PC, haddii taasi ay abuureen "qof kale"?
Maxaad dharka u xirataa haddii qof kale intaas ka kooban yahay?
Maxaad u dhageysataa isla muusigga ay dadka kale dhagaystaan?
Chorra iyo kalihaygu iskumid maaha kuwa kuwa kale
Maxaad u isticmaashaa Archlinux ama Windows haddii dad aad u tiro badani ay isticmaalaan?
Aan aragno sida aan wax walba u sharraxayo ... Ma dhahayo Sandy waa inay ikhtiraacdaa desktop kale ama wax la mid ah, waxaan kaliya u sheegayaa inaadan ku dhejin waxyaabo ka kooban nuqul nidaam kale ah.
Maxay tahay jawaab caruurnimo .. Miyaad fahmi weyday oo kaliya in kuligeen aaneynaan ku dhicin dhibaatada aad ku qabtid OS X, Ubuntu iyo Shuttleworth? Maxay ku kala duwanaanaysaa haddii inteenna kale aan dhimanno sida Dock, badhamada bidix, mawduuca Ubuntu ama xitaa sidaad u leedahay, Reggaeton? Haddii aadan jeclayn mid ka mid ah, ka dib ha u isticmaalin, ha dhegaysanina waana taas. Ha dhex marin nolosha adoo doonaya kuwa kale inay la qabsadaan dookhaaga iyo dookhaaga.
Laakiin yaa jahannamada kuu sheegay inaan ka fikiray Mac, Windows ama OS kale adoo guddiga u dhigaya astaamaha iyo waxyaabaha kale ee raaxada ah ???
Geesinimo, ha isticmaalin daaqadaha, waa qayb ka mid ah OS kale !!! 😛
Jooji oo laguugu yeero «Geesi», oo asalna aan ahayn either
Fuck waxa qalloocan ee aad hayso.
Waxba kama haysto isticmaalka dekedda, mana aha wax waxyeello u leh OS-ga ama wax kasta, weli waa la ixtiraami doonaa haddii qof uu sameeyo nuqul ka mid ah Arch oo uu ku qoro magac kale.
Waa inaad xoogaa asal noqotaa, oo asalka ahaanshuhu macnaheedu maahan inaad ubaahantahay wax aan jirin
xitaa sidaad u tiri, reggaeton
Kiis gaar ah maxaa yeelay taasi maahan muusig, waa shit
Weli waa la i xoori lahaa haddii qof uu sameeyo nuqul Arch oo uu magac kale ku dul qoro.
Waxaan u maleynayaa in loo yaqaan ArchBang, Chakra .. iwm.
Laakiin taasi waa aragtidayada, laga yaabee qof kale inay tahay muusikada ugu fiican adduunka waana inaan ixtiraamnaa taas. Waxa aan ula jeedo troll gacaliye, waa in waqti ka waqti aad ka hor inta aanad ku muujin niyadjabkaaga faallo, u maleyso inay jiraan dad laga yaabo inay ka xumaadaan. Hagaag, waan ogahay inay taasi tahay fikirkaaga shaqsiyeed, laakiin waxaan kuu soo jeedinayaa marka aad sheegaysid, halkii aad ka odhan lahayd: "Mac waa shit", waa inaad tiraahdaa: "Aniga ahaan (qiimeyn, ra'yi), Mac waa shit" ..
Halkii aad ka odhan lahayd: "Mac wuu nuugaa", waa inaad tiraahdaa: "Aniga ahaan (qiimeyn, ra'yi), Mac wuu nuugaa" ..
Shaki la'aan, talo fiican.
Hadday ahayd kaftan, si dhab ah ... xusuusnow in kuwa wax kuu akhrinaya haddii ay dareemaan wax laga xumaado, aysan ka fikiri doonin «Courage de <° Linux waa mid culus"… Hadaanay ahayn"gudaha <° Linux way culus yihiin»😉
Haddii aan ku siinno talo waa sababta oo ah waan ku qanacsanahay, ha ka waaban 😀
Gebi ahaanba sida laga soo xigtay ArchBang, ma ahan inay noqoto mid kala duwan, waa uun Arch + Openbox.
Chakra waa sheeko kale maxaa yeelay waxay rabaan inay noqdaan mashruuc madax banaan waxyaabo badana waa la badalay
Oo yaa dhahaya waxaan idhi waxaad u maleysay Mac si aad uhesho guddiga?
Jooji oo loogu yeero "Geesinimo", oo asalna aan ahayn either
Waan ogahay, laakiin ma dhigaayo inaan magacayga dhabta ah meel walba dhigo.
Kuwa aan dan ka lahayn haddii ay ogyihiin miyaanay garanayn?
Haddii aan ku siinno talo waa sababta oo ah waan ku qanacsanahay, ha ka waaban
Laakiin maahan, aad ayey iigu adag tahay inaan qof qiimeeyo, taasi waa sababta aan kaliya ugu haysto laba qof (iska ilaali cawska maskaxda maxaa yeelay dadkaas midkood ayaa ah midka aad ka fikiri doonto)
@elav <° Linux
Nolosha haddii aad daryeesho inaad ka farxiso qof walba waad ku dambayn kartaa inaad dhimato, haddii qof uu dhibsado faallo sida * mac nuugista *, aan kuu sheego inay tahay dabacsane laakiin aad u dabacsan, illaa ay ka tahay tufaax shaqaale mooyee waa inaadan ka welwelin taas, isla waxbaa ku dhaca qaar ka mid ah microsoft ama ubuntu.
Qabow Waxaan ku isticmaalaa Qaahira-dock Openbox, in kasta oo aan ugu sii baahanahay si ka sii yar waana arin ku saabsan bilicsanaanta.
Geesinimadu kiis maahan, waayahan dambe aad buu u xD
Mid waliba asal buu u yahay qaabkiisa waana jeclahay miiskaaga. Habsiin
Ku jawaab Hache
Waad ku mahadsantahay haha ​​kii ugu dambeeyay, waa wax lala yaabo in qof uu jeclaado desktop-kayga ... markii iigu dambeysay ee aan shaashad ka qaado isaga waxay doonayeen inay i dilaan LOL !!!
Caqli gal ah
Miiskan ayaa aad uga fiican. Sidoo kale waan jeclahay
Marka Gaara, waqtigaas maanaan doonaynin inaan ku dilno, waxa dhacay waxay ahayd in indhaheennu u adkaysan kari waayeen wax badan oo isla barwaaqoobay……
Ku jawaab Ozcar
HAHAHA !!!!! haa haa waan dhahay, waxay rabeen inay i dilaan LOL !!!
Xitaa sidaas oo ay tahay, hadda waxaa jira xog aan u xiisay indha indheyn ahaan, tusaale ahaan heerkulka CPU iyo HDD, wadarta guud ee GBs ee soo dejinta / soo dejinta shabakadda, iwm.
Gaara, miyaadan u xiisi doonin gabadha timo cad ee ka dambeysa daruurahaas sidoo kale? Waxay sidoo kale bartay macluumaad qiimo leh ...
HAHAHAJAJAJAJA !!!!!! 😀
Muxuu u eg yahay sifiican? OL LOL !!
Miyaad aragtay qoraaladii aan sameeyay muddo ka hor Artescritorio?
Hahaha ... waqti ka hor waxaan arkay qoraal aad adigu iska leedahay oo laga helay atariisho qurux badan oo qurux badan oo aanan xusuusan magaceeda, laakiin waxa u qurux badan ayaa ku siiyay geesinimo leh xiriirka kor ku xusan.
Sikastaba, xog wanaagsan, howlahaas waa inaad marwalba maraysaa artescritorio ... 😉
Midka lagu soo raray deked fudud ... xDD
Waa Isar, Sandy iyo Elva qalad
Iyo falsafadaada ladagaalanka nuqul-nacaybka ... oo aad ugula mid ah mid la mid ah xuquuqda lahaanshaha, sax? xD
Midkan dhammaadka leh xuquuqdiisa-xuquuqda iyo isticmaalka Windows, waxaad arki doontaa inay ku dhammaato inuu noqdo basaas Microsoft HAHA
Jaajuusku waa aniga LOL.
"The" ... O_O ... looma malaynayo inay noqonayso "The" ... WTF !!!
Waxay i siin doonaan kombiyuutarka
Samee xoogaa lacag ah ... wax faa'iido leh waa inaad taqaanaa sida loo sameeyo si loo soo saaro dakhli, sax? 😀
WTF kale oo halkan ku wareegsan. Waxaan sidoo kale aaminsanahay waqtigan oo dhan in pandev uu ahaa "the".
Taasi, khaladkeena, adigu marna kama jawaabtid maya? Hagaag, fiiri faallada koowaad ee mawduuca, waxay umuuqataa inay taada ahayd
Laakiin taasi macnaheedu maahan inaad qasab ka dhigto midka ku lugta lahaa. Halkaas, Sandy wuxuu bilaabay inuu ciyaaro carrab la 'markii uu si sax ah u ogaaday waxa aan ka hadlayo ka dibna kuwa kale ayaa isdiiwaangaliyay.
Aad u fiican, waan isticmaali lahaa laakiin icewm waxaa ku soo haray meeshuu ku haray, waxaan hayaa codsiyadeyda oo ku xiran iskudhafka kumbuyuutarka Way fududahay.
Waxa kale oo jira Hawlo Fancy ah, in kasta oo aanu sidaa u dhammaystirnayn oo xoogaa degganayn, runtu waxay tahay inaan isticmaalo hal xabbad-dhaliye, guddi dheeri ah oo la sameeyey ayaa plasma wax badan ka sii badan.
ahh waan ilaaway, halkan waxaa sidoo kale jira aruurinta qaabab kaladuwan oo loogu talagalay guddiga kde http://kde-apps.org/content/show.php/Plasma+Panels+Collection+?content=147589 gnome2 gnome3 kde3 iwm
wow xiiso leh, ma aanan aqoon isaga ... isha ayaan ku hayaa isaga 😀
Waxaan sidoo kale sameeyay taas, ku dhowaad shil ahaan way soo baxday, waxaan isticmaalaa Lubuntu.
Hagaag, waxaan doorbidi lahaa guddiga kde, laakiin si kasta oo aan iskudayo, way guuldareysataa, daaqadaha ayaa hoosta ka gala guddiga, ama hadaan u habeeyo si aan si otomaatig ah ugu dhuunto daqiiqado yar kadib waxay sameyso waxay rabto waligeedna way sii muuqataa waa wax laga xumaado. Ilaa iyo inta aysan hagaajin cayayaankaas, waxaan u maleynayaa inaan u baahan doono deked. Haddii qof uu haysto xal waan ku qanacsanahay, mar hore ayaan isku dayay in aan tirtiro galka .kde4, waxaan ka soo raray xoq markasta isla markana wuu sameeyaa, labadaba Openuse 12.3 iyo 13.1 oo ah tan aan isticmaalo. Salaan!
Ku jawaab Cumar
Robert Rubio Romero dijo
Runtii aniga waxay ila tahay aniga wax weyn aniga kuwa naga mid ah kuwaas oo aan raadineynin habeyn aad u daran, aad u yar sida qof horey u soo sheegey runtiina runti ma cunayo wax ilo ah maxaa yeelay waa qeyb ka mid ah nidaamka. Hadda waxaan isticmaalayaa FEDORA 24 waxaanan ugu arkaa inay waxtar badan leedahay sidan, daacad baan ahay, weligay maan jeclaan laba baarar oo kormeerahayga ah waxaanan khiyaaneeyaa naftayda oo u malaynayaa inay tahay DOCK Aad ayey ii anfacaysaa.
Waad ku mahadsantahay wadaagida fikirka.
Ku jawaab Roberto Rubio Romero
Ubuntu iyo Android midow
Ka saar Miisaska Dulmarka Guud ee Gnome Shell